दुई महिना भयो कहाँ छन् ज्याक मा ? «
दुई महिना भयो कहाँ छन् ज्याक मा ?
प्रकाशित मिति :5January, 2021 6:06 pm
सार्वजनिक नजरबाट ज्याक मा हराएको दुई महिना बितेको छ । उनी निर्णायक रहेको टेलिभिजन शोको अन्तिम एपिसोडमा पनि नदेखिएका अलिबाबाका संस्थापकको असक्रियताले सामाजिक सन्जालमा प्रश्नैप्रश्‍न उठाएको छ ।
सामाजिक सन्जालका आशंकाले चीन सरकारको वित्तीय नियामकले ज्याकको व्यावसायिक साम्राज्यमा लगाइएको अंकुश प्रतिबिम्बित गरेका छन् । चीनका हाई-प्रोफाइल उद्यामी ज्याक अक्टोबर अन्त्यदेखि सार्वजनिक भएका छैनन् । उनले चीनको नियामक निकायमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए । सोही भनाइपछि अलिबाबाको एन्ट समूहको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) रोक्का भएको थियो ।
फाइनान्सियल टाइम्सले गत शुक्रबार ज्याक ‘अफ्रिकाज बिजनेस हिरोज’ अन्तिम अंकमा अनुपस्थित भएको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । सोही समाचारलाई आधार मान्दै द टेलिग्राफले समाचार लेखेको थियो भने संसारभरका सञ्चारमाध्यमले यी दुई समाचारलाई उद्धृत गरेको ज्याक हराएको समाचार लेखे ।
उक्त टेलिभिजन शोको अन्तिम अंकका अलिबाबाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निर्णायकका रुपमा सहभागी थिए । सोमबार अलिबाबाकी प्रवक्ताले रोयटर्सलाई कार्यतालीकामा आएको परिवर्तनले ज्याक उपस्थित नभएको जनाएकी थिइन् । उनले ज्याक हराएको बारे थप बोल्न चाहिनन् ।
ज्याक हराएपछि विभिन्न शंका उपशंका ट्विटरमा गरियो । ट्विटर चीनमा प्रतिबन्ध भएका कारण चीनका सामाजिक सन्जालमा ज्याकको विषय चर्चा रहेन ।
अक्टोबरको उनको अभिव्यक्तिपछि चीनको नियामकले ज्याकको व्यवसाय शून्यबराबर मानेका छन् । अलिबाबामा नियामकले अविश्वासको छानबिन सुरु गरिएको छ । यस्तै एन्टलाई कर्जा संरचना तथा उपभोक्ता वित्त व्यवसायको संरचना परिवर्तन गर्न भनिएको छ ।
सोमबार अलिबाबाको हङकङमा सुचीकृत सेयर मूल्य २.५ प्रतिशतले घटेको छ । चिनियाँ मिडियाले भने ज्याकले सुपरिवेक्षण अँगालेको बताएका छन् । यो अभिव्यक्तिले ज्याक पक्राउ परेको वा नजरबन्धमा परेको शंका उब्जाएको छ ।
चीनले ठूला व्यक्तित्वलाई पक्राउ गर्दा चुप रहने गरेको छ । यस अर्थमा चिनियाँ मिडियाले सुपरीवेक्षण अँगाल्नु भन्नुलाई जेल जीवनमा बसिरहेको हुन सक्ने अनुमान बढेको छ । चिनियाँ मिडियाले मलाई ‘अंकल हर्स’ बाट ‘भ्याम्पायर बिजनेस म्यान’ को संज्ञा दिन थालेका छन् ।
हङकङको द एसिया टाइम्सले पिपुल्ड डेलिलाई उद्धृत गरेर ‘सुपरिवेक्षण अँगालेको’ उल्लेख गरेको छ । चीन छाड्न ज्याकलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ । ज्याकले चिनको वित्त नियामकलाई ‘क’ठपुतली मानसिकता’ भएको भनेका थिए । सोही भनाइका आधारमा ३७ खर्बबराबरको संसारको सबैभन्दा ठूलो आईपीओ निष्कासन रोकिएको थियो ।